Bụ Microsoft Mkpa Book a ndorodoro na MacBook Uru? | Esi m mac
Bụ Microsoft Mkpa Book a ndorodoro na MacBook Uru?
Nke a bụ ajụjụ m nyere ndị ọkà okwu bịakwutere m n'oge MWC afọ a na nguzo nke Microsoft nwere, na Hall 3 nke ihe omume Barcelona. N'eziokwu, ọ dịghị onye n'ime ha chọrọ mmiri na ha ọbụna lere m anya na a iju ihu n'agbanyeghị eziokwu na nke a ọhụrụ elu Book e weere na ya ụbọchị site Microsoft onwe ya na-ama nke MacBook Pro. Ọtụtụ ọrụ nwere ike iche na ọ bụ a 2 na 1, ebe ọ bụ na ihuenyo ya na-enye anyị ọrụ ọrụ aka, mana na nkọwa na nkọwa nke ngwaahịa na ihe omume a Ha gosiri ya otu laptọọpụ zuru oke.
Ozugbo ị meghere ma guzo n'ihu Akwụkwọ a dị n'elu ị pụrụ ịhụ mgbalị Microsoft na-zuru uru nke mbadamba na laptọọpụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ Windows 10 n'onwe ya nke na-agbasawanye na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ibute ọgba aghara n'okwu ndị a ma ọ bụ eziokwu na ọ nwere laptọọpụ karịa 2-in-1, mana ọ nwere ike ịsọ mpi isi na isi a MacBook?
Maka ugbu a, na ilele nkọwapụta akụrụngwa nkọwa na ndị na-arụ ọrụ i5 na i7, anyị ga-asị ee, mana n'oge eziokwu sistemụ arụmọrụ dị mkpa maka onye ọrụ yana mgbakwunye na nke a, nhazi nke elu akwụkwọ ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe jọrọ njọ, anaghị m ahụ ya dị ka ihe ịma aka maka MacBook 12 ″ dịka ọmụmaatụ, ma nụrụ ụtọ na agba.
Na isiokwu nke obere, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na nke a Akwụkwọ Mkpa ya na ihuenyo 13,5 nke anụ ọhịa ahụ Ọ na-enye anyị atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị, na nhọrọ nke ịgbanye kiiboodu kpamkpam na, ekele maka stylus, na-arụ ọrụ dị ka mbadamba ihe osise nke ọma na ngwa ngwa. Nke a na - enye ya ohere karịa laptọọpụ ọ bụla, na mgbakwunye a na-edoziri keyboard ahụ n'azụ ihuenyo ahụ ya mere, ọ naghị enye anyị nsogbu. Nkọwa ọzọ bụ na etinyere batrị ọzọ na keyboard iji nwee ike setịpụ, na-enweta ihe ruru awa iri na abụọ nke nnwere onwe mgbe ha nọkọtara ọnụ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na keyboard na-enyekwu ntọala ahụ.
Ọ bụrụ na anyị lelee nkọwa ndị ahụ, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụ otu egwuregwu dị ike yana na ọ nwere ike ịnwe aka na ụfọdụ Macs dị ugbu a, na-echekwa ọdịiche dị mma. N'ezie, ọnụahịa ya abụghị akụ na ụba ma nke a nwere ike ime nhọrọ onye ọrụ ịhọrọ maka laptọọpụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụlagodi Apple Mac ebe ọ bụ na ọ na-amalite na $ 1.499.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Bụ Microsoft Mkpa Book a ndorodoro na MacBook Uru?
Ọfọn, ọ bụrụ na ịbịaru nso bụ na macbook mara mma karịa na ọ bụ ya mere na ọ bụghị onye na-ama ya aka ... mgbe ahụ nke a bụ mmemme asịrị na ọ bụghị weebụsaịtị maka teknụzụ.
Anụtụbeghị m mgbe ị na-ekwu na ihuenyo ahụ na-ekewa (ihe efu na-enweghị isi) ... ee, amaara m, ị kwuola na enwere ike gbanwee ya na keyboard dị n'azụ, mana ọ bụghị otu na ị ga-eme dị ka inwe ike ime ya na macbook pro (ọ bụ ezie na ọ ga-abaghị uru na ihuenyo na-enweghị mmetụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na nkenke; Obere arụmọrụ, obere ike (ọ nweghị nke eserese a raara nye ịhọrọ), nke a gbasaghị ihe ọ tụrụ, ihe ọ tụrụ ma ọ bụ mkpebi ihuenyo ya, ... ihe anyị gwara ndị nrụpụta ndị ọzọ bụ ime ka ọ 'mara mma karịa' .. Ana m eche na ha tinyere obere apụl n'azụ ya ma kpọgide ya… na ọ bụ ya, ndị nwere obi ụtọ dịka gị.
Kedu elu ala ị na-ekwu maka ya? Naanị m na-ahụ nwanyị dị mkpa 🙂
Ugbu a, m na-achọkwa ihe aha ya bụ.
Ọ bụ naanị oge, selfie stick for MacBooks abịarute
Nkọ ghọrọ ihe onwunwe nke Foxconn ma si otú ahụ nye Apple